प्रधानमन्त्री ओली « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, असार २२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ‘थ्रेट’ बढेको भन्दै सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएका छन्। यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सूक्ष्म सुरक्षा रणनीति अवलम्बन
काठमाडौं, असार १९। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछाडी फर्किने बानी नभएकाले मुलुक दुर्घटनातर्फ जान सक्ने उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले आशंका गरेका छन् । अगाडीको परिणाम के आउछ भन्ने मतलव नगरी दुर्घटना
काठमाडौं, असार १९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि उनी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट बाहिरिने सम्भावना छैन । उनले राजनीतिक रूपमा नै दबाबको सामना
प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा राखिरहनुको औचित्य समाप्तः यादव
काठमाडौं, असार १७ । जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता महेन्द्रराय यादवले सरकारको नेतृत्व पूर्णरुपले असफल भइसकेकाले सत्तारुढ दल नेकपाले यो विषयमा तत्कालै निर्णय गर्न आवस्यक भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी
ओलीले आफ्नो कमजोरी लुकाएर सहानुभूती जुटाउन भारतप्रति दोषारोपण गरेः पूर्व राजदूत बराल
काठमाडौं, असार १५ । भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा लोकराज बरालले आफ्नो असफलता छोप्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय चलखेलको हल्ला चलाएको टिप्पणी गरेका छन्। भारतले आफुलाई हटाउन लागेको
स्थायी कमिटी बैठकमा किन गएनन् प्रधानमन्त्री ओली ?
काठमाडौं, असार १३ । सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटीको चालु बैठकमा बोल्ने नेताहरूले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न सरकारले थालेको प्रयास प्रशंसनीय भएको भन्दै भारतसँग प्रभावकारी वार्ता गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ताका
एमसीसीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ईश्वर पोखरेलले साथ नदिने !
काठमाडौं, ९ असार । एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र रस्साकस्सी सुरु भएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनैपनि
ओलीलाई देउवाको सुझाव : “सञ्चारमाध्यमले औंल्याएका गल्ती सच्याउँंदै अघि बढ्नुहोस”
काठमाडौं, १३ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाको जोखिमका बेला देशभरका पत्रकारका लागि स्वास्थ सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका
काठमाडौं, १२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । उनले आज साँझ ५ः३० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरको हुन् । उक्त सम्बोधन
काठमाडौं, २४ बैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज अपरान्ह ४ बजे बस्दैछ । नेताहरु गत शनिबारको सचिवालय बैठकको सहमतिअनुरुप नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा
सञ्चार जगतको भूमिका अविस्मरणीय: प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, बैशाख २४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सञ्चार जगतले निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पाँचौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस तथा गोरखापत्रको १२०
बालुवाटार बोलाएर फकाउँदै ओली
काठमाडौं, बैशाख २४ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर फकाउन थालेका छन्। स्थायी कमिटीको बैठक नजिकिँदै गर्दा ओलीले कार्यकारी
काठमाडौं, २३ असार । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले बढाएको सक्रियता र त्यसमा